Otu esi akụziri nwata dị afọ iri na asatọ | Ndị Nne Taa
Nke Torres | 22/09/2021 21:00 | Atụmatụ
Ịzụ nwa dị afọ iri na asatọ bụ otu n'ime ọrụ dị mgbagwoju anya nke ịzụ ụmụ. N'ihi na na afọ ahụ, ị ​​bụghị nwata ma ọ bụ okenyeỌ bụ ngwakọta na nwa ọ bụla nwere ike ịdị iche. Ụfọdụ ụmụ nwoke gbara afọ iri na asatọ ka ha bụrụ ndị nwere oke ọrụ na ndị tozuru oke. Mana ndị ọzọ, n'aka nke ọzọ, na -aga n'ihu na -enwe echiche nwata mana enwere ngwakọta homonụ nke siri ike ịchịkwa.
Mana ihe a na -eme ugboro ugboro n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ikpe niile bụ mkpa ọ dị inwe njirimara, inwe onwe ya yana ịnọpụ na nchekwa nne na nna. N'ihi na uche, afọ 18 bụ afọ nke ọtụtụ, opekata mpe na Spain na ọtụtụ mba ndị ọzọ. Afọ na -enye gị ikike tụọ vootu, kwọọ ụgbọala ma ọ bụ rie mmanya ma banye ebe ntụrụndụ. N'echeghị na afọ ntozu gị dabara n'afọ ndụ gị.
1 Ịkụziri nwata dị afọ iri na asatọ, ọrụ dị mgbagwoju anya
1.1 Na -akwanyere oghere onwe ha ùgwù
1.2 Kwuo ókè
1.3 Ugbu a, ọ bụ dimkpa
1.4 Mmụta gbasara mmekọahụ
Ịkụziri nwata dị afọ iri na asatọ, ọrụ dị mgbagwoju anya
Mmụta ụmụaka anaghị akwụsị akwụsị, n'ihi na mmadụ anaghị akwụsị ịbụ ntụnye maka ụmụaka n'agbanyeghị afọ ole ha dị. Mgbe ha toro ma nwee ndụ nke ha, ha na -aga n'ihu na -arịọ ndị nne na nna ndụmọdụ maka nwata na -eche na nne ma ọ bụ nna nwere amamihe pụrụ iche, ọbụlagodi na ụmụaka n'onwe ha ghọrọ nne na nna. Mana Iji ruo ntozu oke ahụ, ị ​​ga -agarịrị ọtụtụ nkebi mgbagwoju anya.
Onye nọ n'afọ iri na ụma Mgbe ọ dị afọ 18, ọ nwere ndụ dị iche n'ihu ya, juputara na ihe egwuregwu na ọnọdụ nke ọ na -enweghị mkpịsị ugodi maka ya. Ma ụmụaka adịla njikere ihu ibu ọrụ nke ịbụ okenye? Ịbụ afọ 18 bụ nnukwu ọrụ na ụmụaka kwesiri ịma nke ya. Agbanyeghị na ha nwere ike zere gị mkparịta ụka ụfọdụ, ọ dị mkpa ịkọwa ihe ụfọdụ dị mkpa na agụmakwụkwọ ha.
Na -akwanyere oghere onwe ha ùgwù
Ka gị na onye na -eto eto nwee ezi mmekọrịta, ọ dị mkpa ịkwanyere ohere nke onwe ha, ghọta na ha chọrọ mkpa nzuzo ha ugbu a ma gee ntị n'echiche ha. Karịsịa n'oge a mgbe a na -agwa ụmụaka ihe, ọ dị mkpa ige ha ntị buru n'uche ihe ha ga -ekwu, maka na ị nwekwara ike ịmụta ọtụtụ ihe nke ụmụaka. Ọ bụ ezie na ọ dị mkpa ịnwe iwu nke ibikọ ọnụ nke a ga -emegharị dabere na afọ na ntozu ụmụaka, ịkwanyere ugwu na mkpa oghere ha bụ isi.
Afọ iri na asatọ akara akara mgbanwe n'ihi na mgbanwe ọnụọgụgụ na DNI na -egosi akara ntozu oke. Nke a pụtara na ụkpụrụ ga -agbanwerịrị, maka mkpa nwa, mana oke ga -agbanwekwa. Mee ka nwa gị doo anya nke ọma ma kọwaa nke ọma ihe oke bụ, n'ihi na ma ọ bụghị ya, ọnọdụ dị mgbagwoju anya nwere ike ibilite n'ime na n'èzí ụlọ.
Ugbu a, ọ bụ dimkpa
Ịbụ okenye pụtara na o kwesịrị ka e mee gị ụdị ihe ahụ, mana ọ pụtakwara ịkpa agwa dịka o kwesịrị. Nke a bụ ịbụ onye nwere ọrụ, inwe iwu doro anya n'ime na n'èzí ụlọ yana ịmara ihe ọ bụla agwa ọjọọ nwere ike ịpụta. Ugbu a nwa gị dị afọ 18 bụ okenye na nke a pụtara ibu ọtụtụ ibu ọrụ. Jide n'aka na ha doro anya.
Mmụta gbasara mmekọahụ
Oge ntorobịa bụ ọgbọ dị mgbagwoju anya nke juputara na mgbanwe anụ ahụ, homonụ na mmetụta uche. Ụmụ nwoke na -amalite ịzụlite mmetụta na mmasị maka ndị ọzọ. Nke a bụ ihe nkịtị, eke na ahụike, ọ bụrụhaala na ha mara ka esi akpa agwa na mmekọrịta. Ọ naghị adịrị gị na ụmụ gị mfe inweta ọzụzụ gbasara mmekọahụ, mana ọ dị mkpa hụ na ha mara ka esi enwe ezi mmekọrịta n'ụzọ ọ bụla.
Gbalịa ka gị na nwa gị nwoke dị afọ 18 nọgide na-enwe mmekọrịta na-emeghe, ka o wee nwee ahụ iru ala ịgwa gị okwu ma mara na ọ nwere ike ịbịakwute gị n'oge ọ bụla yana n'ọnọdụ ọ bụla. N'otu aka ahụ, gị na ụmụ gị nwere ike ikwu gbasara isiokwu ọ bụla. Ikiri ka ha na -etolite bụ nnukwu afọ ojuju, ịhụ ka ha si aghọ ndị okenye nwere ọrụ na ezigbo mmadụ na ekele niile maka ịhụnanya, agụmakwụkwọ na ụkpụrụ anara n'ime ezinụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị nne Taa » Ezinụlọ » Atụmatụ » Ịzụlite 18 Afọ
Ndụmọdụ kachasị mma iji mee ka akpụkpọ ahụ dị ọcha n'ime ụmụaka